Home > Premier Leauge / Serie A / Transfer
စီးရီးအေထိပ်သီးကလပ် ရိုးမားအသင်းဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ လာမယ့် ဇွန်လမှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ့် စပိန်ကစားသမား ပတ်ဒရိုကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် စတင်ချိတ်ဆက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Sky Sport Italia ကဖော်ပြထားပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ပတ်ဒရိုဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၂၇ သန်းနှင့်အတူ ဘာစီလိုနာအသင်းမှ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ကစားတဲ့ ၅ ရာသီကြာကာလအတွင်း ပတ်ဒရိုဟာ သွင်းဂိုးပေါင်း ၄၂ ဂိုးအထ ိသွင်းယူခဲ့သလို၊ အောင်မြင်မှုအနေဖြင့်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားတစ်ကြိမ်၊ FA ဖလားတစ်ကြိမ် နှင့် ယူရိုပါလိဂ်ဖလား တစ်ကြိမ်တို့ကို ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခုရာသီမှာတော့ ပတ်ဒရိုဟာ ပြိုင်ပွဲစုံပွဲပေါင်း ၁၂ ပွဲသာ ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး တစ်ဂိုးနှင့် ဂိုးဖန်တီးမှု ၂ ကြိမ်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ရိုးမားအသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူးဇာနီအိုလို ကာလကြာရှည်စွာ အနားယူရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် တိုက်စစ်မှူ းတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေလျက်ရှိသလို၊ ဘာစီလိုနာရဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူးကားလက်စ်ပီရက်ဇ်ကိုလည်း မကြာခင်အချိန်အတွင်း ခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ အယ်ချီအသင်းရဲ့ လူငယ်ကစားသမား ဂွန်ဇာလို ဗီလာကိုလည်း ယနေ့မှာ ပဲ ဆေးစစ်ခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့် ဝါရင့်စပိန်ကစားသမားရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့သာ ပေါင်းစပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သည့် အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ………..
ခ်ယ္လ္ဆီးရဲ႕ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္ သက္ၾကီးကစားသမားတစ္ေယာက္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္လာခဲ့သည့္ ရိုးမား
စီးရီးေအထိပ္သီးကလပ္ ရိုးမားအသင္းဟာ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းနဲ႔ လာမယ့္ ဇြန္လမွာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္ စပိန္ကစားသမား ပတ္ဒရိုကုိ ေခၚယူဖုိ႔အတြက္ စတင္ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း Sky Sport Italia ကေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ပတ္ဒရိုဟာ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ ၂၇ သန္းႏွင့္အတူ ဘာစီလုိနာအသင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့တာပါ။ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းမွာ ကစားတဲ့ ၅ ရာသီၾကာကာလအတြင္း ပတ္ဒရုိဟာ သြင္းဂိုးေပါင္း ၄၂ ဂိုးအထ ိသြင္းယူခဲ့သလုိ၊ ေအာင္ျမင္မႈအေနျဖင့္လည္း ပရီးမီးယားလိဂ္ဖလားတစ္ၾကိမ္၊ FA ဖလားတစ္ၾကိမ္ ႏွင့္ ယူရုိပါလိဂ္ဖလား တစ္ၾကိမ္တုိ႔ကုိ ကုိင္ေျမွာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ယခုရာသီမွာေတာ့ ပတ္ဒရုိဟာ ျပိဳင္ပြဲစံဳပြဲေပါင္း ၁၂ ပြဲသာ ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ျပီး သြင္းဂိုး တစ္ဂိုးႏွင့္ ဂိုးဖန္တီးမႈ ၂ ၾကိမ္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ရိုးမားအသင္းဟာ တုိက္စစ္မွဴးဇာနီအုိလို ကာလၾကာရွည္စြာ အနားယူရေတာ့မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ တုိက္စစ္မွဴ းတစ္ေယာက္ကုိ ရွာေဖြလ်က္ရွိသလုိ၊ ဘာစီလုိနာရဲ႕ လူငယ္တုိက္စစ္မွဴးကားလက္စ္ပီရက္ဇ္ကုိလည္း မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း ေခၚယူႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ အယ္ခ်ီအသင္းရဲ႕ လူငယ္ကစားသမား ဂြန္ဇာလုိ ဗီလာကုိလည္း ယေန႔မွာ ပဲ ေဆးစစ္ေခၚယူႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဝါရင့္စပိန္ကစားသမားရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔သာ ေပါင္းစပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအေရႊ႕တစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ………..
Categories:Premier Leauge​Serie A​Transfer
ခံစစ်ကစားခြင်း အနုပညာမှာ ပျော်မွေ့ဖို့ အသင်းသားတွေကို သတိပေးခဲ့သည့် အာတီတာ
ပရိသတ်များသာမက ဝန်ထမ်းတချို့ကိုပါ မလိုအပ်ပဲ ကွင်းထဲကို ဝင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တဲ့ EPL ကလပ်များ
မီလန်ဒါဘီပွဲစဉ်မတိုင်မှီ အသင်းဟောင်း နည်းပြ ကွန်တီကို ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်သွားခဲ့သည့် အီတလီဂန္ဓဝင်ကစားသမားဟောင်း ပီယာလို
စီးရီးအေကလပ်များစိတ်ဝင်စားနေသည့် ဘယ်နောက်ခံလူ အီမာဆင်အတွက် ဈေးသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ချယ်လ်ဆီး
Injury / Premier Leauge
အေတီကို နှင့် ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်မတိုင်မှီ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် သတင်းကောင်းနှင့် သတင်းဆိုး !!!!